अरब स्वास्थ्य - रियल हाइपरबारिक चैंबर
घर/पोस्ट/असंगठित/अरब स्वास्थ्य - रियल हाइपरबारिक चैंबर
Tekna छ वास्तविक हाइपरबारिक कक्षहरू प्रदर्शन मा! यो तीन दिनमा धेरै व्यस्त छ अरब स्वास्थ्य प्रदर्शनी र कांग्रेस 2018! हामी हाम्रो3वायुमंडल मोनोप्लास हाईपरबारिक चैंबर र हाम्रो3र6वायुमंडल मल्टीप्लेस हाइपरबारिक कक्षमा प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियामा अभिभूत हुन्छौं। 2018 हाम्रो घर ASME-PVHO प्रबल पोत पसल र विनिर्माण विभागका लागि धेरै व्यस्त वर्ष हुने भएको छ। कृपया आएर हालैमा हेर्नुहोस् हाइपरबारिक चैंबर प्रविधि। Tekna एक छ हाइब्रिड 4000 बूथ मा प्रदर्शन मा हाइपरबारिक चैंबर Z1.C02 यहाँ!
अरब स्वास्थ्य मेने क्षेत्र मा स्वास्थ्य सेवा र व्यापारिक पेशेवरहरुको सबै भन्दा ठूलो सभा हो। घटनाको 2018 संस्करण 4,200 प्रदर्शन कम्पनीहरू र 103,000 + देशहरूबाट 150 सहभागीहरू भन्दा बढी स्वागत गर्न अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदर्शनीको साथमा 19 व्यापार, नेतृत्व र निरन्तर चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) सम्मेलनमा कभर किनारा प्रक्रियाहरू, प्रविधिहरू र क्षमताहरूमा धेरै अद्यावधिकहरू र अन्तर्दृष्टिहरू प्रदान गरिनेछ।
अरब स्वास्थ्य 2018 बाट हुनेछ 29 जनवरी - 01 फरवरी 2018। यदि तपाईं शो भन्दा पहिले दर्ता गर्नु भएको छ भने प्रदर्शनी हेर्नको लागि निःशुल्क छ!
तपाईंलाई यो चाहिन्छ
नि: शुल्क गाइड!
अहिले पाउनुहोस्! सीमित संख्या उपलब्ध छ।
अब 105 विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको
रोगी र क्लिनिकहरूको लागि।
By teknamfg|2018-02-01T08:37:12+00:00फेब्रुअरी 1st, 2018|असंगठित|टिप्पणीहरू बन्द अरब स्वास्थ्य - रियल हाइपरबारिक चैंबर मा
यो कथा साझेदारी, तपाईंको प्लेटफर्म छनौट!
लेखक को बारेमा: teknamfg